कमजोर वाइसिएल+शिथिल युथ फोर्स= युवा संघ
कृष्ण गिरी आइतबार, साउन २५, २०७७
काठमाडाैं– २०६४/६५ सालतिर तत्कालीन नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन वाइसिएल निकै चर्चामा थियो । विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई वाइसिएलमा रुपान्तरण गर्‍याे । जहाँ अरु थुप्रै युवा संगठित भए ।
सुरुसुरुमा वाइसिएलले राम्रा काम गर्‍याे । प्रहरीले नभेटेका अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक गर्‍याे । न्याय माग्न अदालत र प्रशासनमा होइन, वाइसिएलकहाँ जाने चलन सुरू भयाे । पछि क्रमशः वाइसिएलको साख गिर्दै गयो ।
एक समय तत्कालीन एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघअन्तर्गतको युथ फोर्सले धेरै चर्चा पायो । देखिने नै गरी केही सामाजिक काम गर्‍याे । बेथितिविरुद्ध आवाज उठायो । तर, क्रमशः युवा फाेर्सको पाइन पनि खस्कँदै गयो ।
युथ फोर्स छुट्टै संगठन नभएर युवा संघभित्रको एक निकाय थियो । तत्कालीन युवा संघका कोषाध्यक्ष महेश बस्नेतलाई संयोजक बनाइएको थियो । तर। बिस्तारै युथ फोर्स नै युवा संघको छायामा परेको थियो । जता पनि युथ फोर्सको चर्चा हुन थाल्यो ।
एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको लामो समयपछि युवा संघ र वाइसिएलबीच पनि एकीकरण भयो । दुई संगठन मिलेपछि झन् भुत्ते भयो । नेपाली कांग्रेसनिकट युवाको संगठन तरुण दलको स्थिति पनि उस्तै अस्तव्यस्त छ ।
विगतमा युवा संगठनले गरेका काम
वाइसिएलले २०६४ सालमा बैंक ठगी आरोपका फरार अभियुक्त सीताराम प्रसाईंलाई खुला मञ्चमा ल्याएर सार्वजनिक गरेर प्रहरीको जिम्मा लगायो । २०६४ सालमै वाइसिएलकै पहलमा कालिमाटीको सडक विस्तार भयो ।
कतिपयले वाइसिएललाई सारथीका रूपमा बुझे पनि कतिपयले आतंकका रुपमा । एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले वाइसिएलको ज्यादती रोक्न भन्दै बनाएको युथ फोर्सले पनि सुरुसुरुमा राम्रै काम गर्‍याे । खुला मञ्च सरसफाइदेखि विपत्तिमा परेककाे उद्धारलगायत क्षेत्रमा युथ फोर्सले सकारात्मक काम गरेको थियो ।
आमनेसामने भएका वाइसिएल र युथ फोर्सले केही सुधारका कामका लागि प्रतिस्पर्धा पनि गरे। जसले पीडामा भएका केही नागरिकलाई राहत महसुस भयाे । पछि सुधारका कामभन्दा पनि नेताका नजिक हुने प्रवृत्ति, पार्टीमा बढ्दो विचलन तथा आन्तरिक कलहलगायतले युवा संगठन भुत्ते हुँदै गए ।
किन खस्कियो पाइन ?
तत्कालीन वाइसिएलका उपत्यका सहसंयोजक तथा वर्तमान युवा संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा भन्छन्, ‘त्यस बेला हामीमा बेग्लै उत्साह थियो । क्रमशः मातृपार्टीको आन्तरिक जीवनमा खटपट आएसँगै वाइसिएल कमजोर बन्दै गयो ।’
तत्कालीन वाइसिएलका महासचिव दिलीपकुमार प्रजापतिको बुझाइ पार्टी तथा संगठनको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी भएर नै सुधारका काम गर्न सम्भव भएको थियो । ‘त्यो समयमा विचार र राजनीतिक कार्यदिशा प्रस्ट थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पार्टीको लाइनमै विवाद छ, भ्रातृ संगठनले कसरी राम्रो काम गर्नु ?’
तत्कालीन एमालेका पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालकाे पालामा युवा संघले युथ फोर्स बनायो । तत्कालीन युवा संघका नेता निरज आचार्य भने, ‘त्यतिबेला वाइसिएलको ज्यादतीविरुद्ध लड्न नै युथ फोर्स बनाएका हौं ।’
पछि युथ फोर्सकै विषयमा पार्टीभित्र विवाद पनि भयो । विवादबीच पनि युथ फोर्सले राम्रै काम गरेको थियो । अहिले नेकपाको युवा संगठन चाहिँ हराएको जस्तो भएको छ ।
एमालेको भ्रातृ संगठनभित्रको एक निकाय यस्तो अवस्थामा पुगेपछि विघटन भएको ती सदस्य बताउँछन् । उनले भने, ‘पार्टी र संगठनलाई राम्रो हुन निकाय गठन गरेको आफैं सर्वेसर्वा हुन थाल्यो । पार्टी संगठनको नियम र विधि विधान नमानेपछि विवादमा आयो । अनि बिस्तारै आफ्नो साख गुमाउँदै गयो । विघटन भयो ।’
अहिले दुवै पार्टी मिलेर सरकार सञ्चालन गरिएकाे छ। पार्टी एकता भएको दुई वर्ष भयो । यस अविधमा पार्टी एकता पनि पूरा हुन सकेको छैन । त्यस्तै, एकताबीच भ्रातृसंगठन पनि अलपत्र परेका छन् । यति चर्चामा आएका दुवै पार्टीका दुवै भ्रातृ संगठन आज भने खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
युथ फोर्ससँग वाइसिएलसँगको भिडन्त भने दिनदिनै हुन थालेको थियो । दुवै संगठन विकास, निर्मार्ण र सामाजिक काम गर्नुभन्दा पनि एकले अर्काको अस्तित्व सिध्याउने अभियानमा नै होमिएका थिए । त्यसैको परिणाम थियो वाइसिएल युथ फोर्स भिडन्त ।
जति जति वाइसिएल कमजोर हुँदै गयो, त्यसरी नै युथ फोर्स पनि शिथिल हुँदै गयो । केही समयकाे तामझामपछि युथ फोर्स नै विघटन भयो । वाइसिएल भने पार्टी एकतासँगै विघटन भयो ।
तर पनि त्यो चमक भएको वाइसिएल र युथ फोर्स किन यस्तो अवस्थामा आए ? यसको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । तर, दुवै संगठनबीच एकता हुँदा पनि कुनै सिर्जनशील काम हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २५, २०७७ १२:०६
बुधबार, असोज २८, २०७७ १८:४५ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल
मंगलबार, असोज २७, २०७७ १५:२२ ओली भर्सेज प्रचण्ड–नेपाल